December 31, 2018 - TV Annapurna
December 31, 2018 TV-Annapurna
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले गठन गरेको कार्यदलले आगामी दश दिनभित्र एकता प्रक्रियामा बाँकी रहेका काम टुङग्याउने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एकता प्रक्रियामा बाँकी रहेका काम टुङग्याउने गरी प्रतिवेदन दिन कार्यदललाई संयुक्त रुपमा निर्देशन दिएका छन् । कार्यदलले केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी, जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष एवम् सचिवको चयन, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, सल्लाहकार समिति र जनवर्गीय सङ्गठनको एकताका विषयमा सुझाव दिनेछ । यस्तै प्रदेश कमिटी गठन गर्दा देखिएका केही असन्तुष्टिलाई समेत सम्बोधन गर्न कार्यदललाई…
December 31, 2018 December 31, 2018 TV-Annapurna
–सिवी अधिकारी , काठमाडौँ । विश्वभर हवाई यात्रुको सङ्ख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ । यात्रु सङ्ख्या बढेसँगै यसका चुनौती पनि चुलिदै गएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ) को प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१७ मा विश्वव्यापी नियमित उडानका यात्रु आवागमन अघिल्लो वर्षको तुलनामा सात दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । हवाई ट्राफिक आवागमनका दृष्टिले एशिया प्रशान्त क्षेत्र विश्वकै सर्वाधिक हवाई यात्रु आवागमन हुने क्षेत्रमा परेको छ । जसले कूल हवाई ट्राफिकको ३४ प्रतिशत अंश ओगटेको छ । त्यस्तै हवाई ट्राफिक वृद्धिका दृष्टिले यस क्षेत्रमा सन् २०१६ को तुलनामा सन् २०१७…
बेपत्ता भएको १३ दिनमा शव फेला
अर्घाखाँची घर्तीखोरमा घरबाट हराएको १३ दिनपछि एक महिलाको शव फेला परेको । अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिका ९ घर्तीखोर निवासी ४३ वर्षीय विष्नी खड्का पुस ४ गते साँझ ८ बजे हराएकी थिइन्। स्थानीय एक महिला बाख्रालाई घाँस काटन जंगल गएको बेला खड्काको शव देखेर स्थानीयलाई खवर गरेकी हुन् । स्थानीयले प्रहरीलाई खबरपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी नायक उपरीक्षक नवराज मल्लको टोली घटनास्थलमा पुगेको थियो। भारतमा नोकरी गर्ने श्रीमानले पठाएको पैसा सन्धिखर्क बाट बुझेर घर पुगेको खबरसमेत गर्न भ्याएकी उनी राती ८ बजेतिरबाट बेपत्ता भएको स्थानीयको भनाई छ । सुस्तमनस्थिती भएको एक…
वर्ष सन् २०१८ मा पनि अमेरिकाको चर्चा र भूमिका धेरै देखियो भने अन्य देशका विभिन्न घटनाहरु पनि विश्वव्यापी भए। वर्षभरीका चर्चित मुख्य घटनाक्रमको सूचीमा राजनीतिक घटनाहरु नै धेरै भएका छन्। त्यस बाहेक हिंसात्मक, आपराधिक तथा अन्य विभिन्न घटनाहरु पनि चर्चाको शिखरमा पुग्न सफल भएका छन्। यस बर्षका मुख्य केही घटनाहरुको यहाँ संक्षेपमा स्मरण गरिएको छ। १. इन्डोनेसियामा दुई हजारको ज्यान लिने भूकम्प यस बर्षको सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो विनासकारी घटनाको रुपमा इन्डोनेसियाको भूकम्पलाई लिन सकिन्छ। सेप्टेम्बर २८ तारिखका दिन आएको ७.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले दुई हजार भन्दा बढीको ज्यान लिएको छ भने…
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुसँग गणतान्त्रिक मूल्य मान्यता नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। ‘यो आरोप होइन, सत्य हो’, थापाले सोमवार राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने। नेता थापाले नेकपाको जहाज पनि दुर्घटना पर्ने बताए। ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जेट चलाउने दुइटा पाइलट हुनुहुन्छ। दुईटा पाइलटमध्ये एउटालाई संघीयता मनै पर्दैन। अर्काे पाइलटले अस्ती संसदमा उद्घोष गर्नुभयो मलाई लोकतन्त्र मन पर्दैन’, गगनले भने, ‘इन्जिन गणतन्त्रको छ, इन्जिन चल्दै चल्दैन। दुइटा पाइलट हुनुहुन्छ, एउटालाई संघीयता मन पर्दैन र अर्काेलाई लोकतन्त्र मन पर्दैन। उहाँहरुलाई यसैगरी चलाउन दिइराख्यो भने…
रसुवागढी नाका जोड्ने सडक मंगलबार खुल्ने
चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढी जोड्ने सडक पहिरोको कारण सोमबार दिनभर अवरुद्ध भएको छ। रसुवाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिका–५ खोपाङ भीरमा सुख्खा पहिरो गएपछि सोमबार बिहानैदेखि सवारी साधन सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। आइतबार राति पहिरो गएको कारण सडक अवरुद्ध बनेको रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेलले बताए। सोमबार दिनभर सडक सुचारु गर्नका लागि काम भएपनि सडक सुचारु गर्न नसकिएको उनले जानकारी दिए। मंगलबार दिउँसोसम्ममा सडक सुचारु हुने बताइएको छ। सडक बन्द भएपछि गत्लाङ, चिलिमे, स्याफ्रु र टिमुरेबाट काठमाडौँका लागि छुटेका बस र केरुङबाट सामग्री बोकेर आएका कन्टेनर बीच बाटोमा नै रोकिएका छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनको उद्घाटन
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अब विद्यालय र कलेजको पाठ्यक्रममा जलवायु परिवर्तन र यसको अनुकूलनका विषय समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) महासङ्घको आयोजना र जिसस सिन्धुपाल्चोकको मुख्य व्यवस्थापनमा आजदेखि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका–९, ज्यामिरे गुफाडाँडामा शुरु भएको ‘राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन–२०७५’ को उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सो धारणा राख्नुभएको हो ।उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याको बारेमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रष्ट बोलिसकेको भन्दै प्राकृतिक सम्पदा उपयोग गर्दा प्रकृति र संस्कृति जोगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, प्रदेश नं–३ का…
इजरायलका लागि नेपाली राजदूतमा डा. शाक्य नियुक्त
डा. अन्जान शाक्य इजरायलका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त भएकी छन्। सोमबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले शाक्यलाई राजदूतमा नियुक्त गरेकी हुन्। शाक्यलाई कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। मंसिर २३ गते उनलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको थियो।
पोखरामा एक महिलाले लगाइन् आफैमाथि आगो
पोखरामा एक महिलाले अस्पतालअगाडि आफैंलाई आगो लगाएकी छिन् । पोखरा पृथ्वीचोकस्थित पश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पताल अगाडि मट्टिटेल खन्याएर आगो लगाएर जल्ने प्रयास गरेकी हुन् । आफैंलाई आगो लगाएर महिला बाटोमा लडिबुडी खेलेपछि प्रत्यक्षदर्शीले आगो निभाएका थिए । उनलाई उपचारका लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएको छ । उनको फोटो खिचेका प्रत्यक्षदर्शी सुरज गुरुङका अनुसार उनी भारतीय महिला हुन् । उनले आफैंलाई किन जलाइन् भन्ने खुलिसकेको छैन ।
कामना सेवा विकास बैङ्कको ६२ औं शाखा कलङ्कीमा विस्तार
कामना सेवा विकास बैङ्क लिमिटेडले आफ्नो सेवा विस्तारको क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाको कलङ्कीमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा आएको छ । बैङ्कका अध्यक्ष सुदिप आचार्य, सञ्चालकहरू देव कृष्ण काफ्ले र विश्वेश्वर सुवेदी तथा कामु. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण बस्नेतले संयुक्त रूपमा कारोबार शुभारम्भ गरेको बैङ्क द्वारा जारी विज्ञप्त्मिा उल्लेख छ । शुभारम्भ कार्यक्रम कामु. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बैङ्कले विभिन्न सहर तथा ग्रामीण भेग लगायत उपत्यकाका अन्य व्यापारिक केन्द्रहरूमा समेत शाखा सञ्जाल विस्तार गर्दै सरल तथा सहज बैङ्किङ सेवा उपलब्ध गराउने बताए ।काठमाडौँ –३०, ज्ञानेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको बैङ्कले देशका विभिन्न भागहरूमा ६२ वटा…